Shalay, waxaan email ka helay aqristaha, Mike, oo i weydiiyay sababta aan sawir ugu dhigayo barteyda oo ii muujisa sida timo madow, taam ah oo gooya goorta - dhab ahaantii - waan cirroobay oo waan cayilay. Waxaa la yaab leh, sawirka aad ku aragto balooggeygu waa aniga qiyaastii 5 sano ka hor. Waxaan kasbaday xoogaa rodol oo timahayguna way sii wada cirro badan yihiin, laakiin aniga ayaa halkaas jooga.
On aniga ku saabsan bogga, waxaad ka heli doontaa sawir aan la kulmayo Seth Godin. Sawirka ku jira madaxayga wuxuu iila egyahay suudhkii aan ku labistay sawirka ee Seth. Waa suudkii aan jeclaa walina waan xidhanahay. Weligay weligay isma qaddarin, laakiin waxaan arkaa in calooshaydu ku tiirsan tahay suunka wax ka badan sidii ay weligeed lahayd.
Bishii ugu dambaysay waxaa la igu dhiirrigeliyey inaan hoos u dhigo xoogaa rodol oo waxaan hoos u dhigay 10 rodol. Daacadnimo dhan, waxaan u istaagi lahaa inaan lumiyo 100 rodol. Xaqiiqdii waan cayilay - natiijooyinka qaab nololeedka jimicsi la’aanta iyo cunnada badan.
Sikastaba, waxaa igu kalifay emailka Mike laakiin waxaan dareemay inaan qasbay inaan ka jawaabo. Ujeedada sawirkeyga ee madaxayga ma ahan inaan helo sawirka ugu xun ee aan heli karo oo aan ku dhajiyo halkaas si aan uga nixiyo dadka. Waa sawir aan jeclahay. Aniga, runti, waa la aqoonsan karaa sawirka (maahan TAAS waqti hore) dadkuna wey iila yimaadaan markasta si ay ii ogeysiiyaan inay aqriyaan balooggeyga.
Sawirku wuxuu qabanayaa shaqadiisa… wuxuu wajiga soo dhaweynta u dhigayaa barteyda wuxuuna dadka u muujinayaa inuu jiro qof dhab ah oo ka dambeeya.
Weligaa ma aragtay Pamela Anderson oo aan qurxin? Ma jiraa qof u taga Pamela oo u sheegta inay 'beenta' dadka u sheegayso maxaa yeelay aad ayey ugufiican tahay culeyskeeda oo isku qurxin ah? Dabcan maya! Iyo xirfadeeda kaliya is si aad u eegto wanaag.
Shaqadaydu maahan inaan noqdo nin lab ah ama jilaa. Shaqadaydu waa inaan ka dhex shaqeeyo suuqgeynta iyo tikniyoolajiyadda isla markaana la wadaago macluumaadkaas akhristayaasha balooggeyga. Haddii aad u maleyneyso inaan qof uun u sameynayo waxyeello ama aan daacad ahayn anigoo qaadanaya tallaabo soo jiidasho leh oo shirkadeed aniga naftayda oo aan ku dhejinayo madaxayga… nolol hel.
Mike, waa inaad noqotaa isla ninki hamburgerkiisa dib u celiya maxaa yeelay uma eka mid ganacsi. Ma waxaad qortay Tom Cruise wali si aad ugu sheegto inuu u muuqdo mid gaaban sida uu ugu jiro filimadiisa? Marka xigta ee aad go'aansato inaad ila soo xiriirto aniga oo u maraya foomkeyga xiriirka, man up and use a real email address. Waxaan qoray cinwaanka emaylka aad igu dhaaftay wuuna booday.
PS: Ma xidho wax qurxiyo ah sawirka madaxa. 🙂